I-NFP ithi iyabeseka abathi uZuma akahambe | News24
I-NFP ithi iyabeseka abathi uZuma akahambe
eThekwini - Iqembu iNational Freedom Party isijoyine amanye amaqembu aphikisayo aphakamisa elokuthi uMengameli uJacob Zuma ashenxe esikhundleni.
Leli qembu lithi sekukaningi uMengameli Zuma enqaba ukuzisulela ngokwakhe esikhundleni sokuba wumengameli wezwe.
I-NFP isiyalele wonke amalungu ayo asePhalamende ukuba athathe izinyathelo ezivimbela uZuma ukuba alibhade ePhalamende.
Leli qembu lithi kucacile ukuthi uMengameli omusha we-ANC uCyril Ramaphosa uyesaba uthuthatha isinqumo sokuxosha uZuma ngokuthula ukuze kubuye uzinzo kuleli lizwe.
"Ukuba manqikanqika kukaRamaphosa ekuthatheni lesi sinqumo kusenza nathi seseke isiphakamiso sokuthi uZuma akahambe futhi siyaseseka isiphakamiso sevoti lokungamethembi uMengameli," kusho uSabelo Sigudu oyiNhloko yezokuXhumana kwi-NFP.
USigudu uthi uThabo Mbeki akazange adale izinkinga ezinjengalezi ngesikhathi ehlulwa kwinkomfa, wasula esikhundleni sakhe ngaphandle kokuphoqwa, "kungani uZuma esaba ukushiya lesi sikhundla ngokuthula"?
Uthe i-NFP ikholelwa wukuthi uZuma kumele ahloniphe imigudu ye-ANC yokujutshwa kwamaqabane, kungenjalo akhishwe ngendluzula.